Guddoomiyaha Gobalka Banadir oo la kulmay Saraakiil ka socday Midowga Yurub (Sawiro) | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Guddoomiyaha Gobalka Banadir oo la kulmay Saraakiil ka socday Midowga Yurub (Sawiro)
Guddoomiyaha Gobalka Banadir oo la kulmay Saraakiil ka socday Midowga Yurub (Sawiro)
Guddoomiyaha Gobolka Benadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Thaabit Cabdi Maxamed ayaa xafiiskiisa maanta oo oo Talaado ah ku qaabilay Saraakiil ka socday Midowga yurub gaar ahaan xafiiska u qaabilsan Soomaaliya ee (EUTM).
Kulanka ayaan faahfaahin dheeraad ah laga haynin waxyaabaha looga hadlay hase ahaatee waxaa lagu waramay inay isla soo hadal qaadeen arrimo Amniga uu ka mid yahay.
Saraakiisha ayaa guddoomiye Thaabit Cabdi Maxamed uga tacsiyeeyay dadkii ku geeriyooday weerarkii Bambaano ee 14kii bishan ka dhacay isgooyska KM5, kaasi oo ay ku geeriyoodeen 358 qof, tiro ka badan 228 qofna ay ku dhaawacmeen, sida ay dhowaan Shaacisay dowladda Soomaaliya.
Guddoomiyaha gobalka Banadir ayaa laga dareemayay in wali xaalad boroor diiq ah uu ku jiray isagoo maro guduudan garabka ugu xiran tahayna la kulmay saraakiisha ka socday (EUTM) ee Midowga Yurub.
“Saraakiisha ka socday (EUTM) ayaa ugu horeyn ka tacsiyeeyay Dadkii ku dhintay qaraxii 14.ka bishaan ka dhacay Isgooska 14.kii October ee Magaalada Muqdisho” sidaas waxaa lagu yiri warkooban oo maamulka gobalka Banadir uu Ku leedahay baraha bulshada.
Previous articleDaawo Sawirada M. Farmaajo oo booqasho ku maraya dalkii 3-xaad ee Bariga Afrika
Next articleSomalia: Suicide attack kills 1, wounds 6 others